လူမှု ကွန်ယက် ပေါ်တွင် SPEAK OUT လုပ်နေသူများ ကို အပြစ်တင်ပြောဆို နေတဲ့ လူတစ်ချို့ အား ထိမိလှတဲ့ စကားလုံးတွေ နဲ့ ပြန်လည် ချေပလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – GaMone Media
Homepage / Celebrity / လူမှု ကွန်ယက် ပေါ်တွင် SPEAK OUT လုပ်နေသူများ ကို အပြစ်တင်ပြောဆို နေတဲ့ လူတစ်ချို့ အား ထိမိလှတဲ့ စကားလုံးတွေ နဲ့ ပြန်လည် ချေပလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
လူမှု ကွန်ယက် ပေါ်တွင် SPEAK OUT လုပ်နေသူများ ကို အပြစ်တင်ပြောဆို နေတဲ့ လူတစ်ချို့ အား ထိမိလှတဲ့ စကားလုံးတွေ နဲ့ ပြန်လည် ချေပလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုတတ်တဲ့ ပုံစံလေးကြောင့် ပရိသတ်တွေများစွာရဲ့ချစ်ခင် အားပေးမှုတွေကို သိမ်းပိုက် ရရှိထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြုံလာရင်လည်း ပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သွေးတည်း တစ်သားတည်း ပါဝင်ခဲ့သူ ဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးက လေးစားအားကျနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သုသုကတော့ ကိုယ်ယုံကြည်ရာပန်းတိုင်ကို နောက်မဆုတ်ဘဲ ရှေ့သို့သာ ရပ်တည်ချက်ခိုင်မာစွာဖြင့် လျှောက်လှမ်းနေသူတစ်ယောက်ပါပဲနော်။
ပြည်သူတွေဒီထက်ပိုပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် အတွက်လည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာများမှတစ်ဆင့် တိုက်တွန်းပေးနေသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Speak Out အမြဲလုပ်ပေးနေသူတွေအား မနာလိုသူတွေတစ်ချို့က ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေကြတာပါ။ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း သုသု ရဲ့ Facebook အကောင့်တွင် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်နေသူများအား အပြစ်တင်ပြောဆိုနေကြသူ တွေများကို ထိမိလှတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ပြန်လည်ချေပ ပြောဆိုလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
” Federal Army တံဆိပ်လေးဖြစ်ဖြစ် နွေဦးတော် လှန်ရေး တံဆိပ်လေး‌ဖြစ်ဖြစ် Profile pictureလေး အရောင်ပြထားလိုက်တယ်…. Wall ထဲမှာ ဟိုသတင်း ဒီသတင်း အရောင်ပြshareထားတာလေး ၂ခု၃ခု…. ပြီးရင် Speak outလုပ်နေတဲ့လူတွေကို ပတ်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်…. မောင်လေးတို့ရေ…. အစ်မတို့ကမောင်လေးတို့အကွက်တွေ မမြင်ရအောင် အစ်မတို့ကမောင်လေးတို့လိုမျိုး ၃ယောက်လောက်ပေါင်း တာတောင် A for Apple, B for Ball ကမတက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေကွယ်…. စိတ်ချ…နင်တို့ကငါတို့ကိုစိတ်ဓါတ်ကျပြီး ဘာမှမတင်စေချင်လေ…ငါတို့တွေဘက်ကပိုပြီးတက်တက်ကြွကြွpostတွေတင်လေပဲဟေ့… နားလည်လား…. နားမလည်ရင်(၃)ခေါက်လောက်စာလုံးပေါင်းပြီးပြန်ဖတ်!!! #အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိနိုင်စေရန်ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္ၿဖိဳးသုကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုတတ္တဲ့ ပုံစံေလးေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြမ်ားစြာရဲ႕ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈေတြကို သိမ္းပိုက္ ရရွိထားသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးႀကဳံလာရင္လည္း ျပည္သူေတြနဲ႔ တစ္ေသြးတည္း တစ္သားတည္း ပါဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အားလုံးက ေလးစားအားက်ေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သုသုကေတာ့ ကိုယ္ယုံၾကည္ရာပန္းတိုင္ကို ေနာက္မဆုတ္ဘဲ ေရွ႕သို႔သာ ရပ္တည္ခ်က္ခိုင္မာစြာျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူတစ္ေယာက္ပါပဲေနာ္။
ျပည္သူေတြဒီထက္ပိုၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ အတြက္လည္း သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုက္တြန္းေပးေနသူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို Speak Out အၿမဲလုပ္ေပးေနသူေတြအား မနာလိုသူေတြတစ္ခ်ိဳ႕က ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ေနၾကတာပါ။ မၾကာေသးခင္ နာရီပိုင္းေလာက္ကလည္း သုသု ရဲ႕ Facebook အေကာင့္တြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ တက္ႂကြစြာပါဝင္ေနသူမ်ားအား အျပစ္တင္ေျပာဆိုေနၾကသူ ေတြမ်ားကို ထိမိလွတဲ့ စကားလုံးေတြနဲ႔ ျပန္လည္ေခ်ပ ေျပာဆိုလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
” Federal Army တံဆိပ္ေလးျဖစ္ျဖစ္ ေႏြဦးေတာ္ လွန္ေရး တံဆိပ္ေလး‌ျဖစ္ျဖစ္ Profile pictureေလး အေရာင္ျပထားလိုက္တယ္…. Wall ထဲမွာ ဟိုသတင္း ဒီသတင္း အေရာင္ျပshareထားတာေလး ၂ခု၃ခု…. ၿပီးရင္ Speak outလုပ္ေနတဲ့လူေတြကို ပတ္ၿပီးတိုက္ခိုက္တယ္…. ေမာင္ေလးတို႔ေရ…. အစ္မတို႔ကေမာင္ေလးတို႔အကြက္ေတြ မျမင္ရေအာင္ အစ္မတို႔ကေမာင္ေလးတို႔လိုမ်ိဳး ၃ေယာက္ေလာက္ေပါင္း တာေတာင္ A for Apple, B for Ball ကမတက္တာလည္းမဟုတ္ဘူးေလကြယ္…. စိတ္ခ်…နင္တို႔ကငါတို႔ကိုစိတ္ဓါတ္က်ၿပီး ဘာမွမတင္ေစခ်င္ေလ…ငါတို႔ေတြဘက္ကပိုၿပီးတက္တက္ႂကြႂကြpostေတြတင္ေလပဲေဟ့… နားလည္လား…. နားမလည္ရင္(၃)ေခါက္ေလာက္စာလုံးေပါင္းၿပီးျပန္ဖတ္!!! #အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္” ဆိုၿပီး ေရးသားထားတာျဖစ္လို႔ ပရိသတ္ေတြလည္း သိရွိႏိုင္ေစရန္ဒီသတင္းေလးကို တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ကူးယူတင္ဆက္ေပးလိုက္ရပါတယ္။
Previous post ကြောက်စိတ်ကို ဘေးချိတ်ပြီး ယောက်ျားသားတွေ နဲ့ ရင်ဘောင် တန်းကာ ရဲစွမ်း သတ္တိ အပြည့် နဲ့ ပါဝင် လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ အမျိုးသမီးများ
Next post လှိုင်သာယာက ပြည်သူတွေ အတွက် စားသောက် ကုန်တွေ လှူဒါန်းမယ့် သူ့ရဲ့အစီအစဉ်လေး မှာ ပါဝင်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ် လိုက်တဲ့ နေဒွေး